रुकुम घटनामा वेपत्ता पाचौंको शव भेटियो « रिपोर्टर्स नेपाल
प्रकाशित मिति : १५ जेष्ठ २०७७, बिहीबार
पश्चिम रुकुमको चौरजहारी नगरपालिका ८ सोतीमा गत शनिवार बेलुका भएको घटनामा परेका पाँच जनाको शव भेटिएको छ । बेपत्ता भएका ६ जना मध्ये थप एक जनाको शव बिहिबार मध्यान्न भेरी नदी किनारमा फेला परेको हो । भेरी नगरपालिका ४ का सन्जु विकको शव जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिकाको कालाभीरनजिक भेटिएको खोजी कार्यमा लागेका आफन्तले बताएका छन् ।
भेरी नगरपालिका ४ का नवराज बिकको शव शनिबार राति नै भेरी नदि किनारमा भेटिएको थियो । आईतबार उनीसँगै गएका चौरजहारी नगरपालिका वडा नं. १ का २० बर्षिय टिकाराम बि.क.को शव घटनास्थलबाट करिब २५ किलोमिटर तल जाजरकोटको भेरि नगरपालिका वडा नं. १२ स्थित खोदा खोला नजिक भेटिएको थियो । सोमबार भेरी नगरपालिका वडा नंं. ४ का २१ बर्षिय गणेश बुढाको पनि शव भेटिएको थियो । उनको शव पनि टिकारामको शव भेटिएको स्थान नजिकै भेटिएको हो । त्यसैगरी भेरी नगरपालिका वडा नं. ११ का १८ बर्षिय लोकेन्द्र सुनारको शव बुधबार दिउँसो भेटिएको थियो । उनको शव चौरजहारी १ स्थित चौरजहारी अस्पतालको नजिक रहेको अधेरे भन्ने ठाउँमा फेला परेको थियो । यस संगै उक्त घटनामा संलग्न ५ जनाको शव भेरि नदिमै फेला परेको हो ।
उनको शव भेटिएपछि अब बेपत्ता हुनेको संख्या १ रहेको छ । भेरी नगरपालिका वडा नम्वर ११ का गोविन्द शाही बेपत्ता रहेका छन् । उनकोे खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीले गोताखोर टिम पनि घटनास्थल नजिकबाट बेपत्ताको खोजी कार्यमा संलन रहेको बताईएको छ ।
घटनामा संलग्न थप ६ जना पक्राउ
उक्त घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा बिहीबार प्रहरीले थप ६ जनालाई पक्राउ गरेको छ । पीडित पक्षले दिएको किटानी जाहेरीका आधारमा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । पीडित पक्षले २० जनाको नाममा किटानी जाहेरी दिएका छन् । यसअघि १२ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । जाहेरीमा उल्लेख भएका थप दुई जनाको खोजी भइरहेको रुकुम पश्चिमका प्रहरी प्रमुख डिएसपी ठकबहादुर केसीले बताए ।
पक्राउ पर्नेमा चौरजहारी नगरपालिका ८ का ४२ वर्षीय इन्द्रबहादुर मल्ल, १९ वर्षीय दीपेन्द्र चन्द, ३५ वर्षीय तिलक चन्द, ४६ वर्षीय हर्कबहादुर मल्ल, ४५ वर्षीय लिपेन्द्र मल्ल र २० वर्षीय विनोद मल्ल रहेका छन् ।
भेरी नगरपालिका ४ का नवराज विकको प्रेमिकालाई ल्याउन रुकुमको चौरजहारी नगरपालिका वडा नम्बर ८ सोती गएको बेला घटना भएको थियो । १७ वर्षिय मल्ल थरकि युवतीलाई ल्याउन जाँदा सोतीका गाउँलेहरुले आक्रमण गरेर उनीहरुको मृत्यु भएको मृतकका आफन्तजनले बताएका छन् भने त्यसरी आक्रमण नगरेको नगरेको स्थानीयले बताएका छन् । गाउँमा हुल बाधेर खराब नियतका साथ आएकाहरुलाई प्रहरीमा बुझाउने गरी समात्न खोजेको उनीहरुले बताएका छन् ।-जनआस्थाबाट
यी हुन् सईमा बढुवा सिफारिश भएका ६६ असई (सुचीसहित)
काठमाडौं, २६ असार । फुली लगाएको भोलिपल्टै ६६ जना सईको बढुवा सिफारिश गर्न लगाएर नेपाल
आइजीपी क्षेत्रीलाई बधाई दिन प्रहरी प्रधान कार्यालयमै किन पुगे सेनापति थापा
काठमाडौं, २६ असार । आइजीपी शैलेश थापा क्षेत्रीलाई बधाई दिन प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा प्रहरी प्रधान
गाँजा सहित पक्राउ
मकवानपुर, २६ असार । अवैध लागूऔषध गाँजा सहित राम बहादुर भोलन सहित ३ जना बिहीबार
जुवातास खेलिरहेको अवस्थामा पक्राउ
कास्की, २६ असार । जुवातास खेलिरहेको अवस्थामा निर्मल बहादुर भट्टराई लगायत ५ जनालाई नगद सहित
अवैध रुपमा ल्याउँदै गरेको युरिया मल सहित पक्राउ
सप्तरी, २६ असार । अवैध रुपमा ल्याउँदै गरेको युरिया मल सहित धर्मदेव मिश्रलाई बिहीबार राति
जग्गा व्यवसायीलाई धम्की दिने ज्योतिष अर्जुन कुमार थापा अख्तियारको नियन्त्रणमा
काठमाडौ, २६ असार । जग्गा व्यवसायीलाई धम्की दिएको अभियोगमा ९ जनालाई अख्तियारले नियान्त्रणमा लिएको
ग्याङस्टर देखि कुख्यात अपराधीको किन हुन्छ प्रहरी ‘इन्काउन्टर’
भारतमा ग्याङस्टर विकास दुबे प्रहरीसँग मुठभेडमा मारिएका छन् । आज विहान उनी झाँसी र कानपुरको
अवैध रुपमा मृगौला प्रत्यारोपण गरेको अभियोगमा चार जना डाक्टर पक्राउ
असार २७, काठमाण्डौ । अवैध रुपमा मृगौला प्रत्यारोपण गरेको अभियोगमा प्रहरीले चितवनको भरतपुर मेडिकल कलेज
बोलिभिया सिनेटकी अध्यक्ष कोपामा कोरोना पोजेटिभ
२७ असार : बोलिभियाका सिनेटका अध्यक्ष मोनिका इभा कोपाले आफूलाई कोरोना भाइरस पोजेटिभ भएको बताएकी